Global Voices teny Malagasy » Japàna: Polisy Mitsikilo Ny Miozolmana Na Dia Voaràran’ny Lalàm-Panorenana Aza · Global Voices teny Malagasy » Print
Japàna: Polisy Mitsikilo Ny Miozolmana Na Dia Voaràran'ny Lalàm-Panorenana Aza
Voadika ny 11 Aogositra 2016 3:29 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Maoske ao Kobe. Sary an'ny Pete Ford, mpampiasa Flickr . CC BY 2.0.
Noho ny finoany fotsiny, narahan'ny polisy ao Tokyo maso ny zavatra ataon'ireo Miozolmana ao Japàna, hatramin'ny 2008 farafahakeliny. Tsy ela akory izay, nolavina ny raharaham-pitsaràna iray noheverana hijerena ny maha-araka ny lalàm-panorenana ity fandaharanasa fanarahana maso ity.
Ny 31 May 2016, nolavin'ny Fitsaràna Antampony ao Japàna ny raharaha fametraham-panontaniana momba ny maha-ara-dalàna ny fanaovana fanarahana maso sy fakàna ny mombamomba ireo Miozolmana ao Japàna, eny fa na dia tena tsy ara-dalàna amin'ny ankapobeny aza ny fanarahana maso mifototra amin'ny resaka finoana na foko araka ny lalàm-panorenana ao Japàna, izay manipika mafy  ny zo hanana fiainana manokana, hanana fiarovana mitovy manoloana ny lalàna, ary ny fahalalahana ara-pinoana. Nanamarika teboka faratampony io, tamin'ireo taona marobe nisian'ny raharaham-pitsaràna nataon'io vondron'ny mpitory io ihany, tany amin'ny fitsaràna samihafa izay nahazoana didy isan-karazany.
Ny zavamisy dia hoe lasa fanta-bahoaka ny fanaovana fanarahana maso ireo Miozolmana nataon'ny polisy tao Tokyo tamin'ny 2010, rehefa tafaporitsaka tety anaty aterineto ireo antontan-taratasy maherin'ny 100 an'ny Departemantan'ny Polisy an-tanandehibe. Nahitàna anarana, adiresy ary mombamomba manokana ireo olona Miozolmana monina ao Japàna ireo antontan-taratasy ireo. Efa taona maro talohan'ny 2010 no nisy ilay fanarahana maso, ary raha ny fahitàna azy dia natosiky ny fifanarahana fiarovana ny Vovonambe G-8 amin'ny 2008 natao tao Japàna.
Araka ny gazety an-tsoratra Japan Times amin'ny teny Anglisy: 
Naborak'ilay poritsaka fa nanangona antsipirihany tamin'ny mombamomba ireo Miozolmana 72.000 ny polisy, isan'izany ireo mombamomba manokana ny tena toy ny fanambaràna ny kaonty any amin'ny banky, ny antsipirihany avy amin'ny pasipaoro ary firaketana an-tsoratra ny fivezivezen'izy ireo. Nasehon'ilay poritsaka ihany koa fa tamin'izany fotoana izany dia nasian'ny polisy kamerà tany anatin'ireo maoske ary nampiasa mpitsikilo ry zareo hiditra tamin'ireo fikambanana Islamika tsy mikatsaka tombontsoa, sy ireo mpivarotra ary toerana fisakafoanana halal.
Taorian'ilay poritsaka, nitory ny governemanta sy ny polisy ny 17 tamin'ireo Miozolmana voalaza anarana tao anatin'ilay antontan-taratasy, mba hilazàna ny tsy maha-ara-dalàna ilay fitsikilovana. Tamin'ny 2014, neken'ny Fitsaran'ny Distrika ao Tokyo fa nanitsakitsaka ny zon'ireo mpitaraina hanana ny fiainany manokana ilay poritsaka, ary nanome azy ireo 90 tapitrisa Yenn ( eo amin'ny US $900,000) ho onitra . Kanefa, namoaka didy ihany koa ilay fitsaràna hoe “nilaina sy tsy azo nihodivirana”  ilay fanangonana vaovao mba hiarovana an'i Japàna amin'ny asa fampihorohoroana iraisampirenena, na eo aza ny lalàm-panorenana manome ny fahalalahana ara-pinoana sy ny fiarovana mitovy manoloana ny lalàna.
Tao anatin'ny raharaham-pitsaràna iray tamin'ny 2014 nifandray tamin'ilay poritsaka, nanambara ireo mpitaraina hoe :
‘olona teo amin'ny 12.677, manome ny 89 isanjato amin'ireo teratany vahiny miisa 14.245 avy amin'ireo firenena silamo voarakitra ao Tokyo’ no nohadihadiana sy noraketina anaty solosain'ny Departemantan'ny polisy an-tanàndehibe sy ny Masoivohon'ny Polisim-Pirenena ny mombamomba azy ireo, tamin'ny 31 May 2008, ary taty aoriana kely, tamin'ny fotoanan'ny fifanarahan'ny Vovonambe Hokkaido Toya Lake tamin'ny Jolay tamin'izany taona izany, dia ‘nandrakitra olona efa ho 72.000 avy amin'ireo firenena ao amin'ny OIC (Fikambanan'ny Kaonferansa Islamika) (salanisa manome 98 isanjaton'ny fanadihadiana).’
Tany ampiandohan'ny 2016, nangatahan'ilay vondrona ny Fitsaràna Antampony ao Japàna mba hamoaka didy momba ny maha-ara-dalàna na tsia an'ilay fanarahana maso. N 31 May, nolavin'ny Fitsaràna Antampony ilay raharaha, raha sady namoaka fanapahankevitra ry zareo hanomezana onitra ireo Miozolmana voatohintohina tamin'ilay poritsaka.
Ao amin'ny bilaogy Center for Constitutional Rights , Igeta Daisuke, iray amin'ireo mpiaro ny mpitory tafiditra amin'ilay raharaha, no manoritsoritra amin'ny antsipirihany kokoa ny fidadasik'ilay fandaharanasa fanarahana maso:
Nisy olon'ny polisy miafina napetraka tany amin'ireo maoske nanerana ny firenena, ary nitatra saika tany amin'ireo lafim-piainana hafan'ny Miozolmana ilay fandaharanasa fanarahana maso, tany amin'ireo toerana fivarotana halal ka hatrany amin'ireo nantsoin'ny polisy tamin'ny fomba hafahafa hoe fikambanana “mifandray amin'ny Silamo” izay nahitàna ireo Mpitsabo Tsy Voafehin'ny Sisintany (MSF) , ny UNESCO, ary ONG goavana hafa.
Volazan'ireo antontan-taratasy hafa bebe kokoa ao amin'ilay fandaharanasa fanarahana maso fa nanatona akaiky tsy tapaka an'ireo Miozolmana monina ao Japàna ny polisy, nitaky tamin'izy ireo hanome ny mombamomba azy, ary tena nanao asa fitsikilovana tokoa tamin'ny sasany tamin'ireo hafa mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo. Voalaza fa niantraika tamin'ny fifandraisan'izy ireo tamin'ireo namany, ny mpifanolo-bodirindrina ary ny fianakaviany izany, namela ratra ara-tsaina .
Miaraka amin'ny tsy fisian'ny fanisàn-bahoaka azo raisina , vinavinaina ho misy 100.000 eo ireo olona izay voalaza fa Miozolmana monina ao Japàna. Teratany Japoney ny sasany amin'ireny olona ireny, raha ny hafa kosa mpianatra tsy Japoney sy mponina maharitra manana fifamatorana lalina amin'ilay firenena.
— Otsuka Masjid/大塚マスジド (@otsukamasjid) July 26, 2016 
Ny 9 Jolay, nanatevina laharana hetsika an-tsitrapo iray tao amin'ny vala iray ao Ikebukuro (Tokyo) ny Maoske Otsuka (Majid). Nanampy tamin'ny fanolorana curry 320 izahay ho an'ireo olona 150 tsy manana hialofana. Maro ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo no niaraka taminay mba hanampy ihany koa. Isaorana ny tsirairay izay nandray anjara tamin'ity anio ity (26 Jolay 2016) !
Noho ny Làlan'ny Landy,  fandraharahàna ara-barotra, efa mihoatra ny arivo taona no nifandray tamin'ireo faritra be Miozolmana teto amin'izao tontolo izao i Japàna. Kanefa, nila niandry ny fiafaràn'ny fitokana-monina nandritry ny fotoana ela nahazo an'i Japàna tamin'ny taonjato faha-19 sy ny fanombohan'ny fisokafan'ny firenena vao nanomboka niroborobo ny vondrom-piarahamonina Miozolomana tao an-toerana.
Ertugrul was first Islamic ship carrying Muslims to Japan in 1890, and the first known official contact between… https://t.co/omQLbmHPWV 
— Islam In Japan Media (@IslamJapanMedia) August 3, 2016 
Ny sambo Ertugrul no voalohany indrindra nitondra Miozolmana nankao Japàna tamin'ny 1890, ary io no fifandraisana ofisialy fantatra ho nisy voalohany teo amin'ny …
Tany amin'ny 1935,  nisy maoske iray najoro tao Kobe, ilay seranantsambo goavana fanaovana raharaham-barotra tao andrefana. Naorina tamin'ny 1938 ny maoske Tokyo Camii . Hita aty amin'ny vanim-potoana taorian'ny ady ny fahatongavan'ireo mpifindramonina avy any Bangladesh, Iràna, ary Indonezia  sy ireo firenena Miozolmana hafa. Ny sasany tonga hianatra tany amin'ireo sekoly Japoney, raha ny hafa indray tonga hanao asa an-tselika. Ankehitriny dia misy maoske isaky ny faritra tsirairay ao amin'ny firenena. 
Sarotra ny hilaza hoe azo handrefesana sa tsia ny fomba fandraisan'i Japàna ireo Miozolmana ny hetsika nataon'ny Departemantan'ny Polisy an-tanàndehibe sy ny Polisim-Pirenena. Ohatra, tsy ela akory izay ny Governemanta an-tanàndehibe ao Tokyo dia namoaka boky iray taridàlana natao ho an'ireo vahiny Miozolmana mpivezivezy:
Check out TOKYO #MUSLIM  Travelers’ Guide! Welcoming visitors of all backgrounds & cultures. https://t.co/0ohE2rH5Uy  pic.twitter.com/Sa1u7KgO7s 
— Tokyo Gov (@Tokyo_gov) July 31, 2016 
Torolàlana ho an'ireo #MIOZOLMANA Mpivezivezy ao Tokyo! Mandray ny mpitsidika avy amin'ny ankolafy & kolontsaina rehetra
Ny Novambra 2015, taorian'ilay fanafihana tao Parisy , nisy sary iray mahatsikaiky niely tany anaty aterineto mampiasa ny teny Anglisy, momba ny lisitr'ireo lazaina fa fepetra maneritery  napetrak'i Japàna, izay mandràra tokoa ny fifindramonin'ireo Miozolmana. Taty aoriana dia fantatra ny marina  momba ilay sary mahatsikaiky. Mahazo alàlana hitsidika, honina ary ho lasa teratany Japoney aza ireo Miozolmana ao Japàna. Nahatonga ireo politisiana toy ny Praiminisitra Abe Shinzo  ihany koa hanindry ny maha-zavadehibe ny fifandeferana. Na izany aza, mitohy ihany ilay fandaharanasa fanarahana maso ataon'ny polisy.
Hatreto aloha, misy ifandraisany amin'ny fisian'ireo Miozolmana vitsivitsy mipetraka ao Japàna ny toepo mandefitra asehon'i Japàna manoloana ny Silamo. Sarotra ny hilaza hoe zava-maningana amin'ny fomba fijerin'ny vahoaka Japoney na tsia ny fihetsika ataon'ny polisy amin'ireo Miozolmana, na famantarana iray ny fanilikilihana ara-piarahamonina lalindalina kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/11/86355/
 Pete Ford, mpampiasa Flickr: https://www.flickr.com/photos/punkrockpete/2420388185/in/photolist-4FT85M-4FT99e
 izay manipika mafy: http://ccrjustice.org/home/blog/2015/12/18/guest-blog-challenging-japans-extensive-surveillance-muslims
 gazety an-tsoratra Japan Times amin'ny teny Anglisy:: http://www.japantimes.co.jp/community/2016/07/13/issues/shadow-surveillance-looms-japans-muslims/#.V6PUqFUrKVM
 nanome azy ireo 90 tapitrisa Yenn ( eo amin'ny US $900,000) ho onitra: http://www.debito.org/?p=12069
 namela ratra ara-tsaina: http://www.japantimes.co.jp/community/2016/06/15/issues/whos-watching-japan-state-secret/#.V6QWClUrKVM
 Miaraka amin'ny tsy fisian'ny fanisàn-bahoaka azo raisina: http://www.dailysabah.com/asia/2015/05/31/muslim-population-in-japan-increases-with-islamic-demands
 July 26, 2016: https://twitter.com/otsukamasjid/status/757823572668579840
 Làlan'ny Landy,: http://en.unesco.org/silkroad/countries-alongside-silk-road-routes/japan
 August 3, 2016: https://twitter.com/IslamJapanMedia/status/760765579468894209
 Tokyo Camii: https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Camii
 Bangladesh, Iràna, ary Indonezia: http://www.turning-japanese.info/2013/10/can-muslims-acquire-japanese.html
 isaky ny faritra tsirairay ao amin'ny firenena.: https://www.google.com/maps/d/viewer?dg=feature&msa=0&source=gplus-ogsb&mid=12myZMCDFsTYZwlXEIMtNYtuVNAM
 July 31, 2016: https://twitter.com/Tokyo_gov/status/759539125984763904
 fanafihana tao Parisy: https://globalvoices.org/2015/11/14/the-streets-of-paris-are-as-familiar-to-me-as-the-streets-of-beirut/
 lisitr'ireo lazaina fa fepetra maneritery: https://globalvoices.org/2015/12/11/debunking-rumors-about-japans-anti-muslim-restrictions/
 fantatra ny marina: http://www.turning-japanese.info/2013/10/can-muslims-acquire-japanese.html?q=muslim